यसकारण नेपाली कामदारका परिवारले एउटै देशबाट १० करोड पाए ! तर दुखकाे कुरा …
माघ ७, काठमाण्डाैँ ।
नेपालमा राेजगार छैन् । बर्षैपिच्छे नेपाली कामदारहरु राेजगारकाे लागी बिदेशी जान्छन् । अाफ्नाे देशमा फर्कीने नेपालीहरुकाे लर्काे थाेरै हुन्छ भने विदेशीने नेपालीहरुकाे लर्काे धेरै हुन्छ ।
तर दुखकाे कुरा विदेशीएका नेपालीहरु मध्य केहिकाे ज्यान उतै जान्छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश गएर सम्झौता अवधिमा मुत्यु भएकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । तर कतिले पाउदैनन् ।
यहि विषयमा आजको कारोबारमा यस्ताे खबर छ !
पछिल्लो २ वर्षभित्र नेपाली कामदारका परिवारले कुवेती रोजगारदाताबाट झन्डै १० करोड रुपैयाँ बरारको क्षतिपूर्ति पाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कुवेत गएर सम्झौता अवधिमा मुत्यु भएकाको विभिन्न कारणले रोकिएको क्षतिपूर्तिबापतको १० करोड रुपैयाँ नेपाली राजदूतावासको पहलमा रोजगारदाताबाट भराइएको हो ।